Ngenza kanjani izixhumanisi kuwebhusayithi yami njenge generator backlink generator?
Namuhla, wonke umuntu uyazi ukubaluleka kwiphrofayili yokuxhumanisa kwekhwalithi kuyo yonke inqubo yokusezingeni lewebhu. Futhi asikho isidingo sokuthi leyo mfanelo ihlale ishaya inani lapha - ukhohlwe lezo zikhathi zakudala lapho inani elihle le-backlink lisetshenziswa njengezici eziyinhloko, esikhundleni sekhwalithi yabo yangempela. Futhi ngezansi ngizokutshela ngezindlela ezintathu eziphumelelayo kakhulu zokuthola izixhumanisi zekhwalithi, noma ngingakwazi ukukusho - njenge-generator ye-backlink othomathikhi ngaphandle kokuyekethisa. Ngakho-ke, ake sibone ukuthi ungathola kanjani ama-backlink esemgangathweni, noma singasho i-generator ye-backlink ye-DIY othomathikhi, ngokuzama ukushintshanisa isixhumanisi, kanye nokwenza okuthunyelwe kwebhulogi yezivakashi ukuze uthole isixhumanisi esingokwemvelo ne-high PR (ikhasi lekhasi) ne-DA (igunya lesizinda ) ngokubuyisela.
Le ndlela yokudala yokuxhumanisa (okungenjalo, ukuxhumanisa amasondo) isetshenziselwa kakhulu ukwakha inani elikhulu lokubuyisela emuva kwekhwalithi - vichy sensi baume. Ukushintshaniswa kwesixhumanisi kuyaziwa nangokuthi i-generator backlink eyoba yikhiqiza ngokuzenzakalelayo. Le ndlela ivumela ukuba uthole izixhumanisi eziningi, isibonelo phakathi kwesayithi lakho kanye namanye amawebhusayithi (i. e. , amakhasi ebhulogi aphathwe ngabalandeli bakho, noma mhlawumbe noma yikuphi amanye amawebhusayithi azimisele futhi azimisele ukuhlanganyela kulolu hlelo oluzuzisayo).
Yiqiniso, ukuhamba nge-link exchange kunezinzuzo eziningi, ngaphandle kwengozi engaba khona ukuze uthole inhlawulo yezinjini - ezihlangothini zombili. Ngisho ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo kufanele ube nesibindi ngokwanele ukuzama ngaso kanye kuphela - ngoba lokhu kuyindlela efanele abantu bathola izinzuzo zomphakathi. Ngakho-ke, ukubeka ukugxila okuyinhloko emaphumeleni akho athembisayo, hhayi ukulahlekelwa okungenzeka okuhlobene nokushintshaniswa kokuxhumanisa, uyanconywa ukuba uthathe izinyathelo zokuqapha. Ngisho ukuthi ukuba nebhulogi noma i-website ehlukile ukuhlola lesi simiso okokuqala kungaba isinqumo esenziwe kahle kakhulu ukuqonda imithetho ewusizo yomdlalo kusengaphambili, ngaphandle kokuthola isijeziso esisezingeni esisheshayo.
Imibiko yeBhulogi yezivakashi
Ukushintshaniswa kwe-link kungabonakala kuyingozi kakhulu ngisho nokuzama kanye kanye, akunjalo? Khona-ke ungase ucabange ngenye indlela yokuthunyelwa kwe-quality link-ukubhala okuthunyelwe kwebhulogi yezivakashi. Uma kwenziwe kahle, ukuvakasha izihambeli kungabuye kube inketho enengqondo engakusiza ukuba wenze njengenjenja ye-backlink othomathikhi ngokwakho. Zizwa amandla wangempela okuthunyelwe kwezivakashi - ungafaki isikhathi sakho ngokubhala okuqukethwe okuphakeme kakhulu okuphezulu. Uma usuvele uthole isivumelwano sokuqala sokushicilelwa kubhulogi ethandwayo noma yimuphi omunye umthombo we-inthanethi wesithathu enekhasi elanele kanye negunya lesizinda, sekuyisikhathi sokutshala isikhathi sakho nomzamo ngokubhala.
Uma i-athikili yakho noma isigijimi sakho sesilungile, konke okudingayo ukuyihambisa ekutholeni i-backlink yemvelo ngokubuya. Ngendlela, egunyazwe yizinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo), le ndlela cishe iphephile kakhulu. Ngakho-ke, kufanele uzame ukuthola ama-backlink asemgangathweni ngezikhala zokuvakasha noma kunjalo. Phela, ukuthi isetshenziselwa kakhulu ukupompa ithrafikhi ehlosiwe ngqo kwiwebhusayithi, le ndlela ihlonishwa kahle kokubili nge-newbies, kanye nochwepheshe.